R/W CCC oo u hanjabay Puntland ugana digay… – Kismaayo24 News Agency
R/W CCC oo u hanjabay Puntland ugana digay…
by admin 1st February 2016 081
Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in Xukuumada Somalia ay tallaabo cad ka qaadi doonto cidii ka tirsan Dowlada oo qaadacda go’aanka ay Dowladu ku qaadatay 4.5.
Ra’isul wasaaraha ayaa sheegay in cidna aysan ka aqbali doonin in Siyaasada dalka laga dhigo mid cid waliba ay dooneyso inay ku maamulato qaabka ay wanaageeda u aragto, waxa uuna carabka ku adkeeyay in laga soo bilaabo maamul Goboleed ilaa Siyaasi ay ku qasban yihiin qaadashada nidaamka ay Dowladu u aragtay wanaaga.
Puntland ayaa ah maamulka kale ee diidan nidaamkan.
Cumar C/rashiid waxa uu sheegay in madaxda maamulada dalka ay cayaar ka dhigteen ka tashiga aayaha Somalia, hayeeshee ay Dowladu cidna uga aaba yeeli doonin halka ay u aragto wanaaga.
Waxa uu ka digay in Siyaasiyiinta kasoo horjeeda masiirka Umadda Soomaaliyeed ay warxumo tashiil ka faafiyaan Dowlada, waxa uuna ballanqaaday in Dowladu ay la xisaabtami doonto cid waliba oo carqaladeyneysa Siyaasada Somalia.
Dhinaca kale, waxa uu ballanqaaday in Dowladu ilaa xad ay ka shaqeyn doonto qancinta cid kasta oo wax ka tabaneysa Dowlada, balse aysan aqbali doonin is hortaag.
Duuliye u dhashay Ingiriiska oo lagu Dilay Tanzania
Madaxweynaha jubbaland oo sagootiyey gudoomiyayaasha gobolada iyo degmooyinka jubbaland
Daawo Muuqaal: Khudbadii Xasaasiga aheyd ee Madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyay Shir madaxeedka Midowga Afrika
DEG DEG: Guddoomiye waaxeed cawada lagu toogtay magaalada muqdisho xili uu….
SAWIRRO:-Madxweynaha Soomaaliya iyo Wafti uu hogaaminayo oo gaaray Balanballe
Ahmed sudani 20th January 2018